Dabka lagu qiimeeyay hoos u dhig shaabad GF-B03FR
GF-B03FR Albaabka dabku xiran yahay ee hoos u dhiga shaabad, qaab dhismeedka guga nooca M, oo ku habboon albaabbada boosaska ku leh caleen albaabka. Inta lagu jiro rakibida, waxaa jira 34mm * 14mm iyada oo loo marayo booska hoose ee albaabka. Alaabta dhex dhig, ka hagaaji baalka sheyga, kuna rakib daboolka dhammaadka qurxinta leh boolal. Adeegsiga sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. Markuu dab kaco, shaabadaha balaadhinta dabka ee baalasha lagu rakibay labada dhinacba si dhakhso leh ayey u ballaadhi doonaan si ay u kala baxaan ...
Hoos u dhig shaabadda albaabka GF-B15
GF-B15 Shaabadda hoos-u-dhajinta ee banaanka ku xiran ayaa ku habboon mashaariicda dib-u-hagaajinta kadib. Haddii albaabka lagu rakibay meeshiisa, waxay u baahan tahay in lagu daro dahaadhka codka, kuleylka kuleylka, ka hortagga boodhka iyo shaqooyin kale. Way fududahay oo ku habboon tahay in lagu rakibo dusha sare ee albaabka; muuqaalku waa qurux badan yahay. • Dhererka ： 380mm-1500mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhameystir silver Lacag Anodized ah • Dayactir ： RRVE Aluminiumka daboolka qurxinta leh, ku rakib boolal, ka dibna dabool •
GF-B11 Khatarta hoos u dhiganta ee qarsoon ee si gaar ah loogu talagalay in albaabbada la laabo. Markuu albaabku u boodboodo inuu xirmo, xarigga wax lagu xidho ayaa si otomaatig ah u soo dega si uu u xiro farqiga u hooseeya albaabka. Xaaladda xiran waxay ku xiran tahay magnet xoog leh. Marka xoogga albaabka sibidhka ah gacanta loo mariyo, xarigga xarkaha ayaa si toos ah kor ugu kacaya. Ma jiro khilaaf u dhexeeya xargaha caagga ah iyo dhulka. • Length ： 300mm ~ 1500mm ， • Difaaca farqiga ： 3mm ~ 15mm • Dhamee silver Lacagta Anodized • Qamaarista ： Slot 18mm * 35mm thr ...
Dabka lagu qiimeeyay hoos u dhig shaabad GF-B09
Waxaa tijaabiyey heerka yurubiyanka ah BS EN-1634 saacadaha 1/2 GF-B09 Iskuxirka hoos u dhigida, farsamooyinka isku xidhka afar-afarta ah, oo ku habboon albaabada leh boosaska ku yaal caleen albaabka Inta lagu jiro rakibida, waxaa jira 34mm * 14mm iyada oo loo marayo booska hoose ee albaabka. Dhig badeecada dhexdeeda, oo ku hagaaji daboolka iyo shaabad ku xir labada dhinacba boolal (ama isticmaal boolal si aad uga hagaajisid xagga hoose ee xarigga xiritaanka). Isticmaalka sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Dhererka ： 380mm-1800mm • Farqiga dhajinta ...
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B092
GF-B092 Xidhmada hoos u dhiganta, farsamooyinka isku xidhka afar-afarta ah, oo ku habboon albaabbada leh boosaska ku yaal caleen albaabka. Inta lagu jiro rakibida, waxaa jira 34mm * 14mm iyada oo loo marayo booska hoose ee albaabka. Dhig badeecada dhexdeeda, oo ku hagaaji daboolka iyo shaabad ku xir labada dhinacba boolal (ama isticmaal boolal si aad uga hagaajisid xagga hoose ee xarigga xiritaanka). Isticmaalka sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Dhererka ： 330mm-1800mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhammaystir ： Lacag Anodized ah • Iskuxirid ： Wasakhda ...